यी कलाकार, जसले आफ्नै स्तनले बनाउँछिन् सुन्दर तस्बिर – Ujyaalo Patrika
यी कलाकार, जसले आफ्नै स्तनले बनाउँछिन् सुन्दर तस्बिर
नादिया म्याटिएभ्स्कायीया बेलारुसकी चित्रकार हुन् । उनले आफ्नै प्रयासले चित्रकला सिकेकी हुन् । अहिले उनी आफ्नो चित्रकलाको अनौठोशैलीले चर्चामा छिन् । यी युवती चित्र बनाउनको लागि उनको स्तन प्रयोग गर्छिन् ।
Previous ‘यौ’,न सन्तुष्टी कुन उमेरका महिलासँग ‘यौ’,न स,म्पर्क गर्दा बढी मिल्छ ?
Next छोरीसंग बिहे गर्नुहोस : करोडपति बन्नुस . .